नेपाल आज | हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको भाउ घट्यो !
हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको भाउ घट्यो !
नेपाल आयल निगले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले बिहिबारदेखि लागु हुने गरि हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य घटाएको हो । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)ले पठाएको मूल्य अनुसार हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य घटेर आएकाले निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य घटाएको हो ।
डिजेल पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य भने यथावत राखेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार अन्तराष्ट्रिय उडान तर्फको लागि बिक्री गर्ने हवाई इन्धनको साविकको मूल्य १०५० अमेरिकी डलर प्रतिकिलो लिटरबाट ५० डलर प्रतिकिलो लिटरले घटाई नयाँ बिक्री मूल्य एक हजार अमेरिकी डलर प्रतिकिलो लिटर कायम गरिएको छ ।
निगमले एलपी ग्यासको मूल्य सिलिण्डरमा २५ रुपैयाँ घटाएको छ । उपभोक्ताले एक सिलिण्डर ग्यास अब १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा पाउने छन् । यस्तै, पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भने मूल्य समायोजन गरेको छैन ।
निगमले पाइपलाइन उद्घाटनकै दिन पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको भामूल्य लिटरमा २ रुपैयाँ घटाएको थियो ।
यो समाचार आजको कारोवार दैनिकमा प्रकाशित छ् ।